လူဝင်စားခြင်း၊ ကုသိုလ်ကံနဲ့ တမလွန်မှာအသက်ရှင်ခြင်း
သင်သေပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား? လူဝင်စားတယ်ဆိုတာ တကယ်ပဲလား? တမလွန်မှာကော အသက်ရှင်နိုင်သေးလား? ရှေးဘဝကုသိုလ်ကံဆိုတာကော?
ဒေါက်ဂလတ်(စ်) ဂရူးသူးဝစ်(စ်)၊ Ph.D. ထံမှ
လူတွေဟာ သေခြင်းရဲ့နောက်မှာ -- တစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆို -- ဘာရှိမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်း သိချင်ခဲ့ကြတယ်။ သေခြင်းဟာ အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်လား၊ တမလွန်ဘဝရဲ့အစလား၊ ဒါမှမဟုတ် လူ့ဘဝပေါင်းများစွာရဲ့ ကြားကာလပဲလား? တချို့က သေပြီးရင် ဝိညာဉ်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေထဲမှာ ပြန်ပြီးဝင်စားတယ်လို့ ဟောပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး အမေရိကန်တွေ ၂၅% လောက်က ဒါကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များ လူအများကြီးက လူဝင်စားခြင်းသွန်သင််ချက်ဆီ ယိုင်သွားကြတာလဲ?
ပြန်ဝင်စားခြင်းဟာ လူတွေကို မျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်။ ဒီဘဝမှာမှန်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့မှာ နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ပြန်ဝင်စားခြင်းကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကိုက ပြန်ဝင်စားတဲ့လူတွေအများစုကြီးဟာ သူတို့အရင်ဘဝကိုသိပ်မမှတ်မိကြတော့ဘူးလို့ လက်ခံကြပါတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင် အရင်အမှားတွေဆီက ကျနော်တို့ဘယ်လိုသင်ယူတော့မှာလဲ? တူညီတဲ့အမှားကြီးပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်လုပ်မိတော့မယ့်သဘောပဲပေါ့။ လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးမှုနှုန်းတွေကိုသိမယ်ဆိုရင် လာမယ့်နောက်ဘဝမှာ ကျနော်တို့ အမှန်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိဖို့ အကြောင်းရှိပါသေးသလား?
ပြန်ဝင်စားခြင်းက တရားမျှတမှုကိုလည်း သေချာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Law of Karma (ခေါ်) ကုသိုလ်ကံနိယာမတရား (စကြဝဠာရဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမဟုတ်တဲ့စည်းမျဉ်း) အရ၊ ဘဝဆက်တိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ထိုက်တန်တဲ့အရာကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေက လူ့ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခု ရလာဒ်ကောင်းနဲ့ ရလာဒ်ဆိုးတို့ကို ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးအတိုင်းဆိုရင်တော့ မထိုက်တန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားဖို့အကြောင်း မရှိသလိုပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှအပြစ်မဲ့တဲ့သူ မရှိဘူးလေ။ ဆင်းရဲဒုက္ခတိုင်းဟာ ကုသိုလ်ကံအားနည်းတဲ့အတိုင်း ထိုက်တန်လို့ပါပဲ။ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးလည်းထိုက်တန်လို့ဖြစ်သလို ခြေထောက်မပါပဲ မွေးလာတဲ့ ကလေးလည်း ထိုက်တန်လို့ပဲ။ ကျနော်တို့အားလုံး ဘဝဆက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကံကိုယ်ထမ်းနေကြရတယ်။ သက်ညှာခြင်းတွေ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေ၊ ကရုဏာတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ ပြန်ဝင်စားခြင်းယုံကြည်မှုဟာ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်သိလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အသိစိတ်ကြောင့် ဝန်လေးနေတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းမဟုတ်သလို၊ တချို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို မထိုက်တန်ဘဲခံစားရတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီဒုက္ခကို လျော့ပါးစေရန် သနားစိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရရှိဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နဲ့လည်း မကိုက်ညီပါဘူး။
ပြန်ဝင်စားခြင်းက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို မျှော်လင့်ချက်နဲ့ တရားမျှတမှုအမြင်မျိုး အမှန်တကယ် ပေးနိုင်ပါသလား? ပြီးတော့ သေခြင်းရဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ပြဿနာအတွက် ဘာနှစ်သိမ့်မှုပေးပါသလဲ? ကုသိုလ်ကံနိယာမတရားဟာ ကရုဏာမဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ သတင်းစကားကတော့ ထူးခြားပါတယ်။ ယေရှုက မတရားတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမရှိဘူးလို့ မငြင်းပါဘူး။ သူဟာ ဒုက္ခဖြစ်ပွားစေတဲ့သူတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်း နဲ့ ဒုက္ခခံစားနေတဲ့သူတွေအတွက်နှစ်သိမ့်မှုကိုသာပေးပါတယ်။
ယေရှုက ဘယ်သူမှ ကိုယ်ကျင့်တရားမစောင့်ထိန်းနိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ လူ့နှလုံးသားဟာ မသန့်ရှင်းပါဘူး။ မှားယွင်းတဲ့စိတ်သဘောတွေကို လိုက်လျောတတ်ပြီး၊ မေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံပြီး အပြည့်အဝ ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်တတ်တယ်။ ယေရှုက ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုအတွက် ကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးမှ ကျနော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးနေတယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုက ဒီကမ္ဘာ ဒီ “တစ်ဘဝ”ထဲမှာ သူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လက်ခံတယ်၊ မခံဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ လူတွေ ထာဝရပြစ်ဒဏ် (ဒါမှမဟုတ်) ထာဝရဆုလာဒ်ရရှိကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပါတယ် (ရှင်မဿဲ ၂၅း၃၁-၄၆။ ဟေဗြဲ ၉း၂ရကိုလည်းဖတ်ရန်)။ ယေရှုက သူ ဒီလောကကို “ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှာ” (ရှင်လုကာ ၁၉း၁၀) ကြွလာတယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ “သူတပါးကို စေစားခြင်းငှာမလာ၊ သူတပါးအစေကိုခံခြင်းငှာ၎င်း၊ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကိုရွေးခြင်းငှာ၎င်း၊ ကြွလာသတည်း” (ရှင်မာကု ၁ဝး၄၅) လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုဟာ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်ခြင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ကားတိုင်ပေါ်ကသူခိုးက သူ့အပြစ်ကိုဝန်ချပြီး သူ့ကိုအောက်မေ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ယေရှုက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည်” (ရှင်လုကာ ၂၃း၄၃)လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပရဒိသုဘုံအတွက် ယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝ ကုသိုလ်ပွားများ၊ အကုသိုလ်လျှော့ထားဖို့ မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ ယေရှုကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်း - “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” (ရှင်ယောဟန် ၃း၁၆)။ အမှန်စင်စစ် အဲဒါဟာ ဒီဘဝနဲ့နောင်လာမယ့်ကာလအတွက် သတင်းကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်နဲ့ သွန်သင်ချက်များအကြောင်း ထပ်မံလေ့လာဖို့အတွက် သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအပိုင်းက “ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း” ကိုဖတ်ပါ။